Yaa Ugaarsanaya Saraakiisha Maakhir? | allsanaag
Yaa Ugaarsanaya Saraakiisha Maakhir?
Waa maxay sababta Saraakiisha ka soo jeeda Beesha Warsangeli tiro badan oo ka mid ah loogu dilayaa maamulka Puntland?.
Sawirka sare waa Hal sarkaal oo ka soo jeeda beesha Majeerteen iyo inta ilaalo uu leeyahay
Saraakiishii ugu danbeeyey ee ka soo jeeday beesha Maakhir oo u shaqaynayey maamulka Puntland, ee lagu dilay degaanada Puntland waxa la dilay iyaga oo kaligood ah oo aan ilaalo ama Askar waardiyeesa haysan . Arintan markaan baaritaan dheer ku samaynay oo aan la xiriirnay qaar ka mid Qoysaskii iyo qaraabaddii laga dilay Saraakiisha, waxaan ku ogaanay in sababtu tahay awood dhaqaale iyo maamulka ay u shaqeeyaan oo aan dan ka lahayn
Sarkaalka ka soo jeeda beesha Warsangeli ee u shaqeeya maamulka Puntland waxa uu qaataa waa mushahaarkiis oo qura, oo aan dhaafsiisnayn qoyskiisa, malaha Guno iyo Ilaalo u gaar ah oo ka ilaalisa cadowga ugaarsanaya . Tusaale haddii Sarkaalka ka soo jeedaa beeshaas uu magaalada uu joogo uu ka tago awood uma laha inuu sii kaxaysto Askar ilaalisa oo uu ka bixinayo lacagta Huteelka iyo lacagta ku baxaysa cuntada ay cunayaan .
Taliyaha qaybta Booliiska gobolka Bari oo ka soo jeeda gobolka Mudug intaas oo Askari oo ilaalo ah ayuu leeyhay. Maamulka Puntland ayaa kharashkooda bixiya Taliye ku xigeenkii Booliiska Puntland oo ka soo jeeday Maakhir, kana sareeyey darajo iyo xil ahaanba isaga oo kaligiis ah oo aan haysan ilaalo waardiyeesa ayaa la dilay
Sarkaal ka soo jeeda Beesha Cabdiraxmaan Faroole ee Gobolka Nugaal. Xitaa Tikniko Caalamku ku bixiyey in Alshabaab looga saaro buuraha calmadow ayaa ilaalinaysa
Carmo. Taliyahan waa gudoomiyihii hore ee gobolka Bari ee degmada Galgala hoos tagto, Halka uu culays saari lahaa inuu alshaabaab ka saaro Galgala waqtigii uu haa gudoomiyaha gobolka. isaga ayaa Saldanad iyo ciidamo u gaar ah samaystay
Hadaba waa ayo cadowga ugaarsanaya Saraakiishan ka soo wada jeeda halka beel?
Dilkii ugu horeeyey ee afka loo soo duubtay oo lagu dilay Sarkaal ka soo jeeda Beesha Warsangeli wuxuu bilowday dagaalkii Majayahan ka dib, ilaa hadana waa socdaa. Sida muuqatana dagaalkii Majayahan ee damaca Buuraha Cal madow dadka qaarkiis ka lahaayeen weli waa socdaa
Kooxda kale ee Ugaarsanaysa Sraakiisha Maakhir waa argagixisada Alshabaab oo ay wada shaqeeyaan kooxda hore ee damaca ka leh buurahaa Calmadow
Waxa is waydiin mudan dagaalkii beesha Maakhir iyo SNM ku wada galeen gobolka Sanaag, maalintuu istaagay ilaa maanta Isaaq waxay dileen hal Askari oo iyaga u shaqaynayey oo ka mid ahaa Ciidankooda. Halka maamulka Puntland 18 bilood gudahood lagu dilay, dhowr iyo tobon sarkaal. Hadaba soo lama gaarin xiklligii Bulshada reer Maakhir ay wiilashooda badbaadin lahaayeen oo ay is waydiin lahaayeen waxa ka khaldamay maamulkii ay nabadda ugu tageen oo dilka joogtada uga dhigay
← North Korea Guam missile strike plan ‘ready by mid-August’ Hoheey lacageey wax kala haadshaa, Walle ninkii hayaa waa u hadashaa →